Wenger : In yar Baanu u Jir sanay Inaanu Heshiis La Gallo Hazard
HomeSuuqaWenger : In yar Baanu u Jir sanay Inaanu Heshiis La Gallo Hazard
Cadalool-(Arbaca -May-7 ) – Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa fashilay in Laba sanno ka hor ay kooxdiisu inyar u jir satay inay heshiis la gasho weeraryahanka baasha uga ciyaara kooxda Chelsea ee Eden Hazard .
Xidiga reer Belgium ayaa suuqiisu xaami noqday kadib markii uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Lille sanadkii 2012 kii, markaas oo ay heshiiskiisa isku cidhiidh yeen kooxaha ugu waaweyn oo ay kamid ahaayeen Manchester United, Manchester City, Tottenham iyo Arsenal kuwaas oo dhamaantood dagaal kula gallay kooxda The Blues heshiiska ciyaaryahanka 23 jirka ah.
Ugu dambeyntii Chelsea ayaa kula soo wareegtay heshiis qiimihiisu ahaa €40 million, isagoo isna muhiim iyo fure lagama maarmaan ah u noqday kooxda woqooyiga London ka dhisan, kuna guulaystay bilada xidiga sanadka ee dhalinyarada ‘the PFA Young Player of the Year award” xili ciyaareedkan.
Wenger oo ka sheekaynaya arimahaas ayaa u sheegay Telefishanka BeIN Sports sidan: “Haa, Inaan soo xero galliyo ayaan doonayay. Waxaan ku qaabilay wakiilkiisa gurigayga laakiin waxaanu isku mari waynay waxay ahayd dhinaca lacagta, Chelsea ayaana samaysay markaas kadib dedaal aanan anigu samaynin.
“Wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanada ka bedeli doona [Lionel] Messi, [Cristiano] Ronaldo Hormuudnimada, haddii uu si fiican u sii wado dedaalka uu isku horumarinayo.”
Xogo Ku Saabsan Sababta Fannaanka Maxamed BK Looga Saaray Xidigaha Geeska Iyo Waan-waan Socota
10/05/2016 Abdiwahab Ahmed
Xanta Suuqa Ee Saylada Ciyaaryahanada Iyo Xiisaha Kooxaha Ee Gunaanadka
War Culus: Gerrard Oo Ka Tegaya Liverpool Iyo Khudbaddiisii Qiirada Lahayd Ee Maca-salaamaynta
02/01/2015 Abdiwahab Ahmed